Imibhalo kaDaniel Salikov ku Martech Zone |
Imibhalo nge Daniel Salikov
Kungakhathaliseki ukuthi yisiqalo noma ibhizinisi eliphakathi, bonke osomabhizinisi babheke ngabomvu ukusebenzisa amasu okumaketha kwedijithali ukwandisa ukuthengisa kwabo. Ukumaketha kwedijithali kufaka phakathi ukulungiselelwa kahle kwenjini yokusesha, ukumaketha kwenkundla yezokuxhumana, ukumaketha nge-imeyili, njll. Ukuzuza amakhasimende angaba khona kanye nokuba nomkhawulo wokuvakasha wamakhasimende ngosuku kuncike ekutheni uyimaketha kanjani imikhiqizo yakho nokuthi ikhangiswa kanjani. Ukuvezwa kwemikhiqizo yakho kusesigabeni sesikhangiso senkundla yezokuxhumana. Wenza imisebenzi ehlukene enjalo